‘ट्रेन्डिङ’ गायिकाको उकालो यात्रा
Friday,14 August, 2020 | ३० साउन २०७७
फिचर कला / साहित्य
दिप्सन लुइटेल काठमाडौं, २० असार
१२ कक्षाको परीक्षा सकियो । डाक्टर बन्ने लक्ष्यले ‘प्लस टु’मा विज्ञान पढेकी एलिना चौहानको मनमा प्रश्न खडा भयो, ‘अब के गर्ने ?’
परिवारले छोरीलाई डाक्टर बनाउने सपना देखेको छ । छोरीको मन सङ्गीतले जितिरहेको छ । एलिना अलमल परिन् ।
एसएलसी दिँदासम्म एलिनाले आफूलाई भविष्यको डाक्टरकै रूपमा देखेकी थिइन् । किनभने विद्यालय स्तरमा एलिनाले आफ्नो स्वर चिनेकी थिइनन् । उनलाई आफूले गाउन सक्छु भन्ने पत्तै थिएन ।
एलिनाले त आफ्नो स्वर राम्रो भएको ‘प्लस टू’मा आएर मात्र पत्तो पाइन् । ‘प्लस टु’मा पुगेपछि एलिनाले आफ्ना साथीहरूमाझ गीत गुनगुनाउन थालिन् । धेरैले उनको स्वरको तारिफ गर्न थाले, ‘वाह ! तिम्रो स्वर लास्टै राम्रो छ । अरूको भन्दा फरक छ । सङ्गीत क्षेत्रमा तिमीले राम्रो गर्न सक्छ्यौ ।’
एलिना १२ कक्षामा पुगिन् । ११ कक्षामा आएका नयाँ विद्यार्थी साथीहरूलाई स्वागत गर्नुपर्ने भयो । त्यो नै पहिलो सार्वजनिक कार्यक्रम थियो, जहाँ एलिनाले माइकमा ठूलो स्वरमा गीत गाउने अवसर पाइन् ।
गीत सकेर स्टेजबाट ओर्लिंदै गरेकी एलिनालाई धेरैले तारिफ गरे । एलिनाको नाक फुल्यो । अब भने एलिनाको मन बाझ्यो, ‘डक्टर बन्ने कि गायिका ?’
उनको मन डाक्टरबाट गायिकामा आइसकेको थियो तर परिवारले त्यसलाई स्वीकार्ने पक्षमा थिएन ।
त्यसैले १२ कक्षाको परीक्षा सकिएलगत्तै एलिनाले अब आफ्नालागि आफैँ केही गर्ने सोच राखिन् । सङ्गीत सिक्नका लागि आफैँ पैसा जम्मा गर्ने सोच बनाइन् र झापाकै एउटा निजी विद्यालयमा पढाउन सुरु गरिन् ।
त्यो समयसम्म एलिना कभर गीतहरू गाउने भइसकेकी थिइन् । केहीले एलिनालाई चिन्न थालिसकेका थिए ।
पढाएर आएको पैसा एलिना कभर गीत रेकर्ड गर्न खर्च गर्थिन् । उनलाई विश्वास थियो, ‘अहिलेको लगानीले पछि सफलता दिनेछ ।’
आखिर सफल हुनलाई एलिनाले धेरै समय कुर्नै परेन ।
एलिनाले युट्युब ट्रेन्डिङको शीर्ष स्थानमा आइपुगेको गीत ‘इन्स्टाको फोटो’को रिप्लाई गीत रेकर्ड गराइन्, जुन गीतले एलिनालाई भाइरल नै गराइदियो ।
एलिनाले आफूले गाएको गीत यति हिट होला सोचेकी थिइनन् । तर, एलिनाको रिप्लाई त ट्रेन्डिङमा नै आइपुग्यो । एलिनाको चैतर्फी चर्चा भयो । एलिना दंग परिन् ।
त्यो पललाई सम्झिँदै एलिना भन्छिन्, ‘ट्रेन्डिङमा भएको गीत भएकाले श्रोताले पहिलाको गीतभन्दा बढी सुन्नुहुन्छ भन्नेचाहिँ लागेको थियो तर भाइरल नै होला भन्ने त सोचेकी पनि थिइनँ ।’
रिप्लाई गाएपछि साङ्गीतिक क्षेत्रमा एलिनाको फरक स्वरको चर्चा नभएको होइन तर तत्काल एलिनालाई कसले काम दिने र ? त्यसमाथि एलिना त झापाकै स्थायी बासिन्दा ।
एलिनाले पुनः झापाबाटै अर्को कभर गीत सार्वजनिक गरिन्, ‘तिम्रो मायाले बाँधेर राख ।’ यस गीतले पनि युट्युब ट्रेन्डिङमा कब्जा जमायो ।
तर, यो गीतपछि एलिना विवादमा परिन् । यस गीतको आधिकारिक टिमसँग कुनै अनुमति नलिई गीत रेकर्ड गराएर आफ्नो च्यानलमा हालेको भन्दै एलिनालाई विवादमा मुछियो । अन्ततः एलिनाले गाएको उक्त कभर गीत युट्युबबाट हटाइयो ।
एलिना भन्छिन्, ‘हामीले अनुमति लिनुपर्छ भन्ने कुरा नै थाहा पाएनौँ । त्यसैले त्यस्तो भएको थियो । पछि विवाद भएपछि युट्युबबाट हटायौँ ।’
उक्त गीत आएपछि भने एलिनालाई सङ्गीतकारहरूले खोज्न थाले । एलिनालाई अवसर दिन चाहनेहरू देखिन थाले ।
त्यही समय एलिनाले झापाबाट नै अर्को कभर गाइन्, ‘सागर बरु सुकेर गइजाला ।’ यो गीत पनि निकै हिट भयो ।
अब भने एलिनालाई गीतका अफरहरू आउन सुरु भयो । एलिना झापाबाट नै धाएर गीत रेकर्ड गराउन थालिन् ।
एलिना भन्छिन्, ‘यसो अलिअलि मौका मिल्ने होला । त्यसको लागि झापाबाट नै धाएर रेकर्ड गराउँछु भन्ने सोचेकी थिएँ । सुरुसुरुमा त्यहीँ गरेँ । पछि त महिनामा नै ४-५ चोटि आउनुपर्ने भयो । त्यसैले काठमाडौं सर्ने निधो गरेँ ।’
एलिनालाई काठमाडौं प्रवेश सजिलो थिएन किनभने काठमाडौंमा उनको कोही थिएन । परिवारलाई मनाउन पनि गाह्रो । बल्लतल्ल होस्टेलमा बस्ने व्यवस्था गरेर परिवारलाई मनाइन् ।
एलिना काठमाडौं आएको ५ महिना मात्र भयो । उनी विशुद्ध सङ्गीतकै लागि काठमाडौं छिरेकी हुन् ।
काठमाडौं आएपछि एलिना निकै व्यस्त बनिन् । कभर गीतदेखि नयाँ गीतसम्मको रेकर्डमा एलिनालाई भ्याई नभ्याई नै भयो ।
विशेषगरी एलिनालाई कभर गीतहरूकै अफर आउने गथ्र्यो । कुनैकुनै अफरले एलिनालाई खुसी दिन्थे, केही अफरले भने उनको मन अमिलो पनि बनाउने गर्छन् ।
कसैले पुरानो र राम्रो तर दर्शक, श्रोता समक्ष ‘नोटिस’ नभएको गीत अफर गर्छन् । त्यस्ता गीत गाउन पाउँदा एलिना खुसी हुन्छिन् । तर, कतिपयले भने हिट हुने लोभमा केही दिन अगाडि आएका गीतहरू गाउन अफर गर्छन् । त्यस्ता गीत गाउँदा भने एलिनाको मन खुसी हुँदैन ।
एलिना भन्छिन्, ‘केही दिन अगाडि मात्र आएको गीतको कभर त के गाउनु जस्तो लाग्छ । ओरिजिनलमा नै मलाई अफर गरेको भए नि हुन्थ्यो जस्तो नि लाग्छ ।’
कतिपयले त अर्को गीत गाउन दिने प्रलोभनमा पनि कभर गाउन लागाउने गरेको एलिनाको गुनासो छ । तर, सङ्गीत क्षेत्रमा नयाँ भएको र आगामी दिनमा काम पाउने आशामा उनले अफर आएका गीत भने गाइदिन्छिन् ।
जब एलिनाले गाएको गीतको समाचार आउँछ, त्यसबेला उनलाई ‘भाइरल गायिका÷कभर गायिका’को ट्याग लाग्ने गर्छ । त्यसबेला पनि एलिनाको मन केही अमिलो हुन्छ ।
एलिनाले आफ्नै स्वरमा पनि गीतहरू रेकर्ड गराएकी छन् । कतिपय गीतहरू निकै हिट भएका छन् । त्यसैले उनलाई त्यो ‘भाइरल’ वा ‘कभर’ भन्ने ट्याग हटाउन मन छ । उनलाई अब भाइरल वा कभर भन्ने शब्द हटाएर गायिकाको परिचय बनाउन मन छ ।
एलिना भन्छिन्, ‘अब त मलाई भाइरल गायिका वा कभर गायिका नभनिदिए हुनेजस्तो लाग्छ । तर, मैले गाएको कभरजतिको मेरो ओरिजिनल गीत हिट नभएर पनि त्यो ट्याग नहटेको हुन सक्छ । त्यसलाई मैले स्वीकार्नुपर्छ ।’
कतिपय सङ्गीतकारले पनि एलिनालाई लियो भने गीत भाइरल हुन्छ भन्ने धारणाले एलिनालाई अफर गर्ने गर्छन् । कतिपय सङ्गीतकारले भने आफ्नो सङ्गीतमा एलिनाको स्वर कस्तो सुनिन्छ भन्ने अभ्यासका लागि पनि सहकार्य गर्ने एलिना बताउँछिन् । उनले जति सङ्गीतकारसँग काम गरिन्, सबैले एलिनालाई राम्रै प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
केही सङ्गीतकारले भने ट्रेन्डिङमा पर्ने लोभले पनि एलिनालाई अफर गर्छन् । आफूलाई ट्रेन्डिङ गायिकाको रूपमा चिनेर अफर गर्दा पनि खुसी नै छन् एलिना ।
‘म ट्रेन्डिङमा परेँ भने त सङ्गीत क्षेत्रको दिग्गज व्यक्तिको नजरमा पनि पर्छु । मलाई धेरैले चिन्न थाल्नुहुन्छ’, एलिना भन्छिन्, ‘त्यसैले मलाई ट्रेन्डिङ गायिका भनेर चिन्दा पनि फरक पर्दैन ।’
एलिनालाई फरकफरक सङ्गीतकारहरूसँग काम गर्ने मन छ । फरकफरक जनरामा गाउने रहर छ । आफ्नो स्वर कुनकुन जनरामा फिट हुने रहेछ भनेर जान्ने रहर छ ।
एलिना भन्छिन्, ‘मलाई त लोक गीत पनि गाउन मन छ । चलचित्रको गीत पनि गाउन मन छ । हेर्दै जाऊँ, भाग्यले कतिसम्म साथ दिन्छ ।’
एलिनाले चलचित्रका लागि एउटा गीत रेकर्ड गराइसकेकी छन् । केही गीतहरूमा कुरा भइरहेको छ । चलचित्रमा गाउन पाउने कुराले एलिना दंग बनेकी छन् ।
‘चलचित्रमा गाउने गायक÷गायिका भन्नेवित्तिकै छुट्टै स्थान हुन्छ । त्यसैले पनि चलचित्रमा गाउने निकै ठूलो इच्छा छ’, एलिनाले आफ्नो सपना सुनाइन् ।
कुनै समय सङ्गीतमा परिवारको साथ नपाएकी एलिनाले अहिले आफ्नो परिवारको साथ पाएकी छन् ।
कुनै समय कभर मात्र गाइरहेकी एलिनालाई अहिले गीत रेकर्डिङ र भिडियो सुटिङमा भ्याई नभ्याई नै छ ।
गफगाफको अन्त्यमा एलिनाले समस्या पोखिन्, ‘शुक्रबार ३ वटा गीत एकैचोटि रिलिज हुने भयो । मैले कुन गीतलाई प्रचार गर्नु ? एउटाको गरे अर्को रिसाउने, अर्कोको गरे अर्को !’
प्रकाशित मिति: शनिबार, २० असार २०७७, ०१:३७:००
अस्करका विद्यार्थीलाई सिंगापुरे स्टुडियोको छात्रवृत्ति
नाजिर र रोशनी अभिनित 'झरी' सार्वजनिक
शीतल शर्माको ‘महारानी’ सार्वजनिक (भिडियो)
दिप्सन लुइटेल दिप्सन लुइटेल
हिराेकाे पुस्तान्तरण : को बन्ला अबको स्टार ?
फुर्सदिला सिनेकर्मीका ७ गाली महात्म्य
'ट्रेण्डिङ गायिका' भन्दा खुसी समीक्षा
चलचित्र प्राविधिकको कन्तबिजोग
काठमाडौंमा थप कडाइ, जिल्ला प्रशासनले यी गतिविधिमा गर्‍यो निषेध
साताका चर्चित : बोहराको वीभत्स हत्यादेखि पत्रकार बानियाँको मृत्युसम्म
अवरुद्ध त्रिभुवन राजपथ २४ घण्टापछि खुलाइयो
पहिरोपीडितको उद्धार र राहत उपलब्ध गराउन अध्यक्ष राणाको माग
पेट्रोल पम्पको १ करोड ८ लाख हिनामिना अभियोगमा असई कार्की पक्राउ
लिदी पहिरो : पीडितको बासस्थानका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गरिने
कोरोनाको त्रासः मोरङको रतुवामाईमा १० भदौसम्म लकडाउन
४ अर्ब ४५ करोडभन्दा बढीको आईपीओ निष्कासनका लागि पाइपलाइनमा
कोरोना पुष्टि भएका ३ जना प्रहरी सेती अस्पताल भर्ना
कल्पनाको बयान : आँखै अगाडि छोरीलाई बलात्कार गर्न खोजेपछि हत्या गरेँ
गाेंगबु वीभत्स हत्याकाण्डको अन्तर्कथा
प्रणव मुखर्जीका छोराको ट्विटः भारतीय मिडिया फेक न्युजका कारखाना